I-Seaview Honeymoon Room Mabul Lodge - I-Airbnb
I-Seaview Honeymoon Room Mabul Lodge
UMabul Paradise unezimvo eziyi-54 zezinye iindawo.
IMabul paradise Lodge yindawo yosapho exhaphakileyo eqhuba i-scuba diving lodge kude nonxweme olusempuma lwaseMalaysia kwisiqithi saseMabul. Sibonelela ngombane weeyure ezingama-24 kunye namanzi amatsha. Indawo ekuchithelwa kuyo iiholide inenkangeleko enkulu yemveli kwaye ibekwe kumanzi aluhlaza aluhlaza. Luhambo olufutshane lwe-1hr ngesikhephe ukusuka kwi-semporna's pier. Yimizuzu engama-25 kuphela yokuqhuba ngesikhephe ukuya eSipadan Island edumileyo.
Ixabiso lakho libandakanya ukutya oku-3 ngobusuku ngomntu ngamnye
Yonwabela ukutya kwaselwandle okufikelelekayo okuvela kwisikhephe sabalobi xa bethengisa ukutya kwabo okutsha emnyango wendlu yokulala. Ungavumela ubuchule bakho bokupheka bugqame okanye ube nompheki wethu wasekuhlaleni ophekela ukutya kwaselwandle ngendlela esithanda ngayo ukuba nazo. Senza izifundo ze-padi eziqinisekisiweyo ze-scuba diving okanye i-dis dives ngamaxabiso akhuphisana namanye. Ukuba ukuhamba phantsi kwamanzi akuyiyo into yakho, krola isikrini sokuzikhusela kwilanga uze untywile phambi kwegumbi lokulala ngexesha lokutyibiliza phezulu okanye ulandele izikhephe zokudayiva ukuya elwandle. Sikwabonelela ngohambo oluya kwiziqithi ezikufutshane njengesiqithi esidumileyo saseKapalai. Ngaphezu koko, unokuqesha i-kayak ngexesha lokutshona kwelanga uze wonwabele ukubona indawo entle efumaneka kwisiqithi saseMabul. Okokugqibela, ukuba uyakuthanda ukuhamba ngesikhephe kwaye ungathanda ukubona okungakumbi kunxweme olusempuma lwe-7h, khwela kwisiqithi sethu sokunyuka intaba esikusa kwiziqithi ezintathu zokuphefumla; i-bohey dulang, i-mantabuan kunye ne-sibuan.
Onke amaxabiso nenkcazelo engakumbi edweliswe ngezantsi.
Igumbi A UBUSI begumbi le-Moon Atlan370/Pax/Ubusuku
Igumbi UKUBUKA ULWANDLE Igumbi eliyi-Pax/NGOSUKU
https://abnb.me/gycW9vUAzQ IGUMBI B ELIQHELEKILEYO igumbi eliqhelekileyo eliyi-1/nge-Pax/NGOSUKU
https://abnb.me/price} fqyzWAzQ IGUMBI C IGUMBI ELIQHELEKILEYO eliyi-190/Pax/NGOSUKU
https://abnb.me/7hvVI5YAzQ IGUMBI D dormwagen/Pax/UBUSUKU HTTPS://ABNB.ME/DPX7DK4AZQ
NCEDA UQAPHELE: i-imeyile/umyalezo/ufowune ukuze ubuze ngamagumbi ohlukeneyo namaxabiso ngaphambi kokubhukisha ngo-airbnb. Ipolisi yethu yokurhoxa iyahluka kwizinto ezifumaneka kwi-airbnb, ngoko nceda ubuze uze uqaphele nayo.
IMabul Garden Lodge iseMabul Island, eSemporna, eSazar, eMalaysia.
Sisekufutshane nesikolo sokuqala kuphela kwesi siqithi. Sikumgama wemizuzu eyi-2 kuphela ukuya kwi-Smart Sipadan resort. Indawo yethu yokuhlala sisakhiwo esizimeleyo esenziwe ngendlela yesintu elwandle oluvulekileyo neendawo ezintle onokuzibona. Indawo edumileyo yokudayiva edumileyo yaseLobster Wall e-Mabul Island ikwiimitha eziyi-500 kuphela ngaphambili, ubunzulu obunzulu buziimitha eziyi-50.
Unokubona ii-sunsets ezintle kwiveranda yethu uze ukonwabele ukubuka isibhakabhaka esineenkwenkwezi ezininzi ebusuku ukusuka kwinqaba yethu.
Sinikezela ngeentlobo eziyi-4 zendawo yokuhlala;
ixabiso legumbi lethu liqala kwi:
IGUMBI D - rmwagen/pax/ngosuku (amagumbi okulala ayi-4 anamagumbi okuhlambela ayi-2 ngaphandle).
IGUMBI C - Rm190/pax/ngosuku Igumbi eliqhelekileyo elinegumbi lokuhlambela
elifakiweyo IGUMBI B - rmwagen/pax/ngosuku Igumbi eliqhelekileyo elinegumbi lokuhlambela elifakiweyo
IGUMBI A -ukubona ulwandle rmwagen/pax/ubusuku kunye negumbi lokuhlambela
elifakiweyo IGUMBI I-HONEYMOON SUITE Atlan370/Pax
ONKE AMAXABISO ACATSHULIWEYO NJENGE-PAX NGOSUKU KUQUKA IZIDLO EZIYI-3 KUNYE NE-6% SST EPHUMELELAYO
E-Mabul: I-snorkeling rm30,
i-diving rmwagen E-Kapalai: snorkeling rm50, diving
rm150.00 I-Discovery Scruba Diving(kwabo bangenaso isiqinisekiso sokudayiva) rprice} 80 kube kanye nge-pax nganye
abantu abangaphezu kwe-2 rm250/
pax I-Scruba diving yesibini ukuya phambili yi-rm.00 i-pax/dive nganye
I-Kayaking rm20/iyure ye-2 seater kayak (i-URL EFIHLIWEYO) i-Rm15/iyure ye-seater kayak eyi-1 (i-URL efihliweyo) Ukukhwela iziqithi (iziqithi ezi-3) uhambo losuku rprice} 80/pax luquka isidlo sasemini, ubuncinane abantu abayi-8 kuhambo ngalunye, ukudluliselwa kwesikhephe kunye nokubhukuda. Iziqithi ezi-3 ziquka iBohey Dulang, iMantabuan kunye neSibuan. E-Bohey Dulang u unganyuka uye phezulu, nto leyo ethatha imizuzu eyi-45 ize le ndawo iphefumle. Uhambo lokudayiva nge-pax nganye
yi-rm550.00/pax Sinokulungiselela ukudluliselwa kwesikhululo seenqwelo-moya fr tawau ukuya kwi-semporna ibuyisa i-rm50/pax (bhatala ngqo ukucwangcisa umqhubi webhasi). Uhambo oluphantse lube yiyure enye nesiqingatha.
Ukuhamba ngesikhephe (malunga neyure enye) fr semporna ukuya kwi-mbul ibuyisa i-rm150.00/pax iquka imvume ye-mabul.
ONKE AMAXABISO acatshuliweyo kwi-RIGGIT MALAYSIA PER PAX KUQUKA i-6% YERHAFU YENKONZO KARHULUMENTE
pls zive ukhululekile ukusithumelela umyalezo ukuba unaso nasiphi na esinye isicelo. Enkosi
Singaqhagamshelana nawe ngefowuni, ngomyalezo okanye nge-imeyile. Ukhumbule ukuba ixesha laseMalaysia ngu- GMT+8